မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ အလှူ
Posted by ဂျေ ဂျူ ၀ိုင် on Aug 28, 2010 in Events/Fundraise, News | 1 comment
မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ၀က်ဆိုက်၏ မန္တလေးမြို့၊ အောင်တော်မူဘုရားတွင် စနေနေ့ ညနေတိုင်း ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်သော အဖွဲ့မှ ယခုနှစ်တွင် ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဖြစ်ပါသည်။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ရန် တိုင်ပင်မိကြချိန်မှာ တစ်ပတ်သာ အချိန်ရသဖြင့် ၀က်ဆိုက်သို့ ကြော်ငြာ အသိပေးခြင်းမျိုး မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သိမီသူများသာ လှူဒါန်းလိုက်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်။
တံမျက်စည်းလှည်းရင်း ကြမ်းတိုက်ရင်း ၀က်ဆိုက်ထဲမှ ဘယ်သူရေးတဲ့စာက ဘယ်လို၊ ဘယ်သူက fb မှာ ဘယ်လိုအော်တာ စသဖြင့် ပြောရင်း ဆိုရင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်သည့်အကြောင်းကို ရောက်သွားခဲ့သည်။ တံမျက်စည်းလှည်းပြီးနောက် အောင်တော်မူ ဘုရားဂေါပကများထံသွား၍ ဆွေးနွေးကြည့်ရာ “အကယ်၍ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်မည် ဆိုလျှင် ၀မ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ဤ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်ခြင်းသည် အောင်တော်မူဘုရား၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ခြင်း ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း” ကို ပြောပြကာ သဘောတူခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်တို့မှ အလှူငွေ ကောက်ခံခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ရရှိကောက်ခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁။ အင်းတော်ရှမ်း >……………………………………………..>>> ၂၀၀၀၀
၂။ ထွန်းဇော်ဦး >……………………………………………….. >>>၁၃၀၀၀
၃။ ဇော်ဖြိုးအောင် >……………………………………………..>>> ၁၁၅၀၀
၄။ Phyu Lay (ထိုင်ဝမ်) >……………………………………….>>> ၁၁၀၀၀
၅။ သခင့်အိမ် >…………………………………………………..>>> ၈၀၀၀
၆။ အေးဆုမြတ်မော်+သဲဆုမြတ်မော်>…………………………..>>> ၅၀၀၀
၇။ သင်းသွယ့်သွယ့်အောင် (လိရိပ်)> ……………………………>>> ၅၀၀၀
၈။ မီးငယ်စန္ဒာ> …………………………………………………..>>> ၅၀၀၀
၉။ ဇင်မာနွယ်> ……………………………………………………>>> ၅၀၀၀
၁၀။ လှမျိုးအောင် (Hor Ton H)> …………………………………>>> ၅၀၀၀
၁၁။ နန်းလေပြေနု >………………………………………………>>> ၅၀၀၀
၁၂။ တိုမိုကိုလေး >………………………………………………..>>> ၅၀၀၀
၁၃။ ဂျေဂျူဝိုင် >…………………………………………………..>>> ၅၀၀၀
၁၄။ ကိုကိုမောင် >…………………………………………………>>> ၅၀၀၀
၁၅။ အေးနန္ဒာကျော်+အေးမြတ်သူ >……………………………..>>> ၅၀၀၀
၁၆။ အာကာဖြိုး> …………………………………………………>>> ၂၀၀၀
၁၇။ ကိုဦး> ………………………………………………………..>>> ၂၀၀၀
၁၈။ အိအိလင်း> ………………………………………………….>>> ၁၀၀၀
၁၉။ ခင်ငြိမ်းချမ်း> ………………………………………………..>>> ၁၀၀၀
၂၀။ နေရီရီထွန်း> …………………………………………………>>> ၁၀၀၀
၂၁။ ခင်မျိုးအေး> …………………………………………………>>> ၁၀၀၀
၂၂။ မြတ်သူဇာ> ………………………………………………….>>> ၁၀၀၀
၂၃။ ခင်မျိုးထွေး > ………………………………………………….>>> ၅၀၀
စုစုပေါင်း ရရှိငွေ ……………………………………………… ၁၂၃၀၀၀…. ကျပ်…..ဖြစ်ပါသည်။
အစပထမတော့ ကျွန်တော်တို့မှ သင်္ကန်းတစ်စုံလျှင် (၅၀၀၀) ကျပ် တန်ဖိုးရှိသော သင်္ကန်းများကို ကပ်လှူသွားမည်ဟု ပြော၍ အလှူငွေကို ကောက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်မှ ရရှိလာသော အလှူငွေအရ သင်္ကန်းကို အကောင်းစား ၀ယ်ပြီး ၀တ္ထုငွေကို တစ်ပါးလျှင် (၅၀၀၀) ကျပ်စီ ကပ်လှူရန်လည်း စီစဉ်လိုက်သည်။
ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ကြီးအတွက် ၂၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ သင်္ကန်းတစ်စုံ
ကျန် ဆရာတော်ကြီးများအတွက် ၈၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ သင်္ကန်းတစ်စုံစီ အသီးသီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဆရာတော်များနှင့် တက်ရောက်လာသော ဂေါပကများ သုံးဆောင်ရန်အတွက် Cocacola သံဗူး(၁)ကပ် နှင့် ဘုရားဖူးလာရောက်သူများကို ဖျော်ရည်စတုဒိသာ တိုက်ကျွေးရန်အတွက် ပင်မှည့်ဖျော်ရည်ဗူး (၁၀)ကပ် ၀ယ်သည်။ အေးအေးလေး သောက်နိုင်စေရန်အတွက် ရေခဲဖြင့် စိမ်သည်။
၁။ ဓမ္မကထိကဆရာတော်ကြီးအတွက် သင်္ကန်း ……………………. ၂၀၀၀၀
၂။ ကျန်ဆရာတော်အတွက် သင်္ကန်း ………………………………… ၃၂၀၀၀
၃။ ဆရာတော်တစ်ပါးလျှင် ၀တ္ထုငွေ (၅၀၀၀) ကျပ်စီ………………… ၂၅၀၀၀
၄။ Cocacola သံဗူး……………………………………………………. ၁၂၀၀၀
၅။ ပင်မှည့်ဖျော်ရည်ဗူး………………………………………………… ၂၈၀၀၀
၆။ ကန်တော့ပွဲ ………………………………………………………….. ၄၀၀၀
၇။ ရေခဲ………………………………………………………………….. ၂၀၀၀
စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ…………………………………………………. ၁၂၃၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
အောင်တော်မူဘုရား သြ၀ါဒါစရိယ …. ငါးစို့တိုက်ဆရာတော်
အောင်တော်မူဘုရား သြ၀ါဒါစရိယ …. လယ်ကိုင်းကျောင်းဆရာတော်
အောင်တော်မူဘုရား နာယက ………. စံပယ်ရုံမိုးကုတ်ဝိပဿနာဆရာတော်
အောင်တော်မူဘုရား နာယကအဖွဲ့ဝင် … ဆင်တဲပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ စာချဆရာတော်နှစ်ပါးစသော ဆရာတော်ကြီးများအား ဦးစွာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တက်ရောက်ပေးသော ဂေါပက လူကြီးများ၊ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဦးဆောင်ကူညီပေးသော ကိုကိုမောင်နှင့်ကိုဦး၊ ကားကူညီသော လှမျိုးအောင် (Hor Ton H) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အောင်တော်မူ ဘုရား၏ သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်နှင့် နာယကဆရာတော်ကြီးများကို ပင့်ဆောင်ပေးသော ဂေါပက ဦးခင်မောင်လွင်နှင့် အခမ်းအနားကို လှပအောင် ပြင်ဆင်ပေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးသော အောင်တော်မူဘုရားမှ အခြားအခြားသော ဂေါပကများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယခု ပြုလိုက်သော ကုသိုလ်ကို သင်လည်းကုသိုလ်ယူပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ပြောပြကာ ကုသိုလယ်ယူစေပါ။ မမြင်လိုက် မသိလိုက်သော နတ်အပေါင်းနှင့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့အားလည်း အမျှဝေပေးပါရန် တိုက်တွန်းရင်း ကုသိုလ်အဖို့အစုကို အမျှဝေလိုက်ပါသည်။ ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို အလွယ်တကူ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီး မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မရမီ ကြားကာလတို့၌ အပါယ်ဘုံဘ၀မှ လွတ်မြောက်ကာ အရာရာပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ဘ၀များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဟု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
တက်ရောက်သူများဖြစ်သော ကိုမြင့်နိုင်ဦး၊ ကိုလှမျိုးအောင်၊ ကိုတင့်နိုင်လင်း၊ ကိုကိုမောင်၊ ကိုမိုးကေခမ်း၊ ကိုဇော်ဖြိုးအောင်၊ ကိုအာကာဖြိုး၊ ကိုရဲထက်ကို၊ မဇင်မာနွယ်၊ မသင်းသွယ့်သွယ့်အောင်၊ မနန်းလေပြေနု၊ မဇင်မာငြိမ်း၊ မအေးနန္ဒာကျော်၊ မအေးမြတ်သူ၊ မရတနာဝင်းဆွေ၊ မခင်မျိုးအေး၊ မခင်မျိုးထွေး၊ မမြတ်သူဇာ၊ မနေရီရီထွန်း၊ မသူဇာမြင့်၊ မကေသွယ်စိုး၊ မငုဝါ၊ မဝေေ၀ဇင်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်၊ ခရီးလွန်နေသူများအားလုံးနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ မလာရောက်နိုင်သူများအားလုံးကိုလည်း ကြည်နူးစေလျှက်၊ အဝေးမှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ဆိုက်မှ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အမျှဝေလျှက်၊ အခြားအခြားသော facebook , buzz , twitter တို့မှ ဖတ်ရှုသူများကိုလည်း ၀မ်းမြောက်စေလျှက်၊ နောက်… blue cafe မှာ တကာခံသွားသော ကိုရဲထက်ကိုတို့ အတွဲကိုလည်း ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရှေ့ဆက်၍ ရွှေလက်တွဲစေနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလျှက်…
မန်းလေးမှာနေတဲ့ကျနော်က မန်းလေးက မြန်မာသူငယ်ချင်းများနဲ့တွေ့ခွင့်မကြုံသေးတာကိုတော့ ကျနော့်ကိုကျနော်ဘဲအပြစ်တင်ရတော့မှာပါဘဲ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေတွေ့တော့ ဘယ်သူကဘယ်သူမှန်းသိအောင် စာညွှန်လေးထည့်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။